Feeling out of sight | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » Feeling out of sight
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Dec 15, 2012 in Poetry | 34 comments
ကမ္ဘာကျော်ကဗျာစာဆိုဇနီးမောင်နှံ ရောဘတ်ဘရောင်းနင်း နဲ့ အယ်လီဇဘက်ဘရောင်းနင်း တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်အချစ် ကဗျာတစ်ပုဒ်။
How many ways do I love you? Let me count them.
I love you freely, as men strive for rights;
I love you withalove I seem to lose
With my lost saints, I love you with the breath,
Smiles, tears of all my life!- and if God choose,
ချစ်ပုံချစ်နည်းကို ရေတွက်ပြမယ်တဲ့လေ။ ရေတွက်ပြခဲ့တဲ့သူကတော့ အယ်လီဇဘက်ဘရောင်းနင်းပါ။ တကယ်လို့သာ အယ်လီဇဘက်နဲ့ ရောဘတ်တို့ မဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးဆိုရင် ဒီလိုကဗျာမျိုး ပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ ယုံတဲ့အတွက် ကျွန်မကတော့ ဒီကဗျာကို နှစ်ဦးပိုင်နှစ်ဦးဆိုင်ကဗျာလို့ပဲယူဆထားပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ဖို့ဆိုတာ တာဝန်ကြီးလှပါတယ်။ မူရင်းကဗျာကို ဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်ရာလည်း ကျတယ်။ ခေါင်းကျိန်းစရာလည်းကောင်းတဲ့အပြင် ဂေဇက်မင်ဘာများအားလုံးလိုလို အင်္ဂလိပ်စာကိုဖိဖတ်နေမယ့်လူတွေ များမယ်ဆိုတာ သိထားလို့၊ ပြီးတော့ ဒီနာမည်ကြီးအချစ်ကဗျာကို အားလုံးလိုလိုဖတ်ဖူးရွတ်ဖူးမယ်ထင်လို့ ဘာသာပြန် မပြတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ဘာသာပြန်မှ ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးပစ်ရမယ့်ကိန်းဆိုတာလည်း သိထားလို့ပါ။
ဒီကဗျာရဲ့စာသားတွေ စိတ်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ပြေးနေခဲ့တာ ဘဝမှာ နှစ်ကြိမ်တိတိရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ ၂ဝ၁၂ခု၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ရက်နေ့၊ ခွဲစိတ်ခန်းထဲကထွက်လာပြီး မွေးကာစသားလေးရဲ့ပုံကို ဖုန်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကစလို့ ဒီကဗျာဟာ ခေါင်းထဲမှာဖျတ်ခနဲပြေးသွားပြီး အစတစ်စကို မနည်းလှမ်းဆွဲ၊ တဖြည်းဖြည်းပြန်စဉ်းစားယူတာ ထုံဆေးပြယ်ချိန် မှာ ကဗျာကိုလည်း စိတ်ထဲကောင်းကောင်းရွတ်နိုင်သွားပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာ အသက်၂ဝကျော်အရွယ်။
သမီးကိုမွေးတုန်းကတော့ ဒီကဗျာဟာ စိတ်အာရုံထဲမှာ မပြေးလွှားခဲ့ဘူး။ အချစ်ချင်းမတူဘူးလားလို့ အမေးရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ”မေတ္တာဆိုတာမျိုးဟာ နှိုင်းကောင်းတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ မိဘဆိုတာ သားသမီးကို အတူတူချစ်တာချည်းပဲ” စသဖြင့် ထုံးမီစံကျဖြေပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ အယ်လီဇဘက်လိုပဲ အချစ်ကို လက်တွေ့ကျကျခွဲခြမ်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ သမီးကိုချစ်တဲ့အချစ်ဟာ တန်ဖိုးထားပြီးချစ်ရတဲ့အချစ်။ သားကိုကျတော့ ပီတိတစ်မျိုးမျိုးပြည့်အင့်သွားတဲ့အချစ်။ စိတ်ပျက်စရာတွေများလွန်းခဲ့တဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကျွန်မအတွက်ခုချိန်ကတော့ လသာတဲ့အချိန်။ ကျန်ဘဝတစ် လျှောက်လုံးမှာ သမီးနဲ့သားကပေးတဲ့ခွန်အားကြောင့် အချိန်ပြည့်လသာနေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်စိတ်အပြည့်နဲ့ ဂေဇက်ရွာကြီးတစ်ရွာလုံးကို ပြိုင်စံကင်းအချစ်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လက်ဆင့်ကမ်းရင်း နောက်တိုးရွာသားလေးအကြောင်း ကြေငြာလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဂေဇက်မှာ အခုလို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေးတွေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေးတင်ရင်း ရွာကြီးကို လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းလေး တစ်ခုလို ခင်ခင်မင်မင်နေခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်။ အွန်လိုင်းမီဒီယာရဲ့ အားသာတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ ပြောရင်ရမလားမသိ။ အထူးသဖြင့် ပြုံးလို လူ့ဂွစာတစ်ယောက်အတွက် အင်မတန် အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။
BIG BIG Congratulations Ma Pyone!!!!
He is so adorable & lovely!!!
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သမီးလေး ၊ သားလေး တွေ နဲ့ ဘဝ မှာ ပိုပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေ။
သားလေးက ကွန်ပျူတာသုံးဖို့ လက်ကို Ready လုပ်ထားနေပြီ အမေကြီးရေ့။
ရွာကို သတိတရ နဲ့ သတင်းပေးတာ အရမ်းလဲဝမ်းသာတယ်။ ပျော်လဲ ပျော်သွားတယ်။
မမ ပြောသလိုဘဲ ရေစက်က မြင်းကောင်ရေအား တကယ်များသကိုး။
ဆက်ပြီး စာတွေ ရေးပါဦးနော်။
( သမီးကိုချစ်တဲ့အချစ်ဟာ တန်ဖိုးထားပြီးချစ်ရတဲ့အချစ်။ သားကိုကျတော့ ပီတိတစ်မျိုးမျိုးပြည့်အင့်သွားတဲ့အချစ်။ )
ချစ်တတ်လိုက်ကြတာနော်။ အဲဒီအချစ်တွေကြောင့် လမင်းကြီးလည်း ထိန်ထိန်သာ အချိန်တိုင်းပါဗျာ ဆိုသလိုရှိပါစေ မ၀င့်ပြုံးမြင့် ခင်ဗျ။
ကလေးသေးသေးလေးတွေ မချီရတာကြာပြီ။အမျိုးထဲမှာ လူပျိုကြီးအပျိုကြီးတွေများများလာလို့။
အားပေး ကူးယူ လိုက်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
သားကို ချစ်ရတဲ့ အချစ်တော့ ခံစားဖူးပြီ..
နောက်တစ်ယောက် သမီးလေးမွေးပါစေ ဆုတောင်းနေတယ်..
`ဘယ်လိုလူတွေလဲဟေ့ .. ငါ့သမီးစာကျက်နေတယ်.. ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား..` လို့ ပြောချင်လို့
အူယားစရာ နီတာရဲလေး ။ ကျမလည်းနောက်နှစ်လောက်ဆို တူ သို့မဟုတ် တူမလေး ချီရတော့မယ်။ ကလေး ပိစိလေးတွေ ဝေးနေတာကြာပြီ ။
ကလေးက အသားဖြူမဲ့ပုံပဲ ။ ကလေးရော လူကြီးရော ကျန်းမာတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ် ။
နောက်အမပြောတဲ့ နေအင်္သချေ လအင်္သချေ စာအုပ်က ဘယ်ဆိုင်မှာမှ မရတော့ပါဘူး။ ကုန်နေတယ် ပြောကြပါတယ်။
tina2005@wwlmail.com လေးကို ပို့ပေးပါ အမ။ အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်မှပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာဖွားဆိုတော့ ဆောင်းဆိုတဲ့ နာမည်လေး ပါအောင် ကဗျာဆန်ဆန်လေး မှည့်ပေးရင်ကောင်းမယ်။
လက်ကလေးတွေများထောင်လို့.. ။ ဒီအရွယ်.. ဒီလိုထောင်တာ.. ရှားတယ်လေ..။
တက်ကြွသော သားယောက်ျားလေးတယောက်.. ကမ္ဘာမြေက..ရသတည်း…။
မိခင်နှင့် ကလေးအပေါ်…. ကောင်းချီးမင်္ဂလာ..အဖြာဖြာတို့.. ကျရောက်ပါစေ…။
congratulation ဆရာမ ပြုံး။ ချစ်စရာလေး။ ပန်းရောင် သားရေခံလေးကြောင့် စကြည့်ကြည့်လိုက်ချင်း မိန်းကလေးမှတ်လို့။ ဟီဟီ။
” နောက်တိုးရွာသားလေးအကြောင်း ကြေငြာလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ”
ဟဲ ဟဲ ၊ နောက်တိုး ရွာသားလေး ဆိုဘဲ ။
ကြိုတင်ပြီး စရံသတ်ထားတာပေါ့လေ ။
Congratulations ပါ မ ၀င့်ပြုံးမြင့် ရေ ။
အန်တီ ဝင်းရေ …
ကလေးလေးက နီတာရဲ ချစ်စရာလေး …
ဒီရွာသားလေး ရွာထဲဝင်လာတဲ့အခါ ကျုပ်ကို ဦးဦး လို့ ခေါ်လေမလားလို့တောင်မှ
မိဘအပေါ်မူတည်ပြီး ကလေးရဲ့အနာဂတ်ကို မှန်းလိုက်တော့
တူလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ပေါ်ရှူးတွေ အီးတွေထွက်ကျရင်တောင် မရွံတော့ဘူး
မိဘတွေရဲ့မေတ္တာကို စဉ်းစားမိတိုင်း ညည်းမိတဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်..
Mamma, I’ll be
သီချင်းလေးက ကဗျာလိုပဲနော်။ ကာရံမိနေတယ်။
””မိဘအပေါ်မူတည်ပြီး ကလေးရဲ့အနာဂတ်ကို မှန်းလိုက်တော့
မိုးဇက်ရေ — မိဘတွေကို အထင်မကြီးပါနဲ့ ။ ခပ်ညံ့ညံ့ထဲကပါ။
အရီးလတ်ရေ — သားလေးက ကွန်ပျူတာသုံးဖို့ လက်ကိုအသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ အရီးပြောမှပဲ တွေးမိတော့တယ်။
ဆရာခင်ခရေ — တခါတုန်းကတော့ ကိုရှုံးလူ(စိုင်းကွမ်းခေး) ကိုဖြေပေးတဲ့ ကွန်မင့်တစ်ခုမှာ သမီးကို living together ကိစ္စခွင့်ပြုမှာပါလို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီလိုပြောတာ သမီးကို တန်ဖိုးမထား၊ လွတ်လပ်ခွင့်ထင်သလိုပေးတယ် လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်တယ်။ တကယ်က အဲဒီသဘောမျိုး မဟုတ်ဘူးနော်။ မိဘတွေဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို လေးစားရမယ်လို့ ကျွန်မ ခံယူထားတယ်လေ။ ကိုယ့်သားသမီးရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို အလေးအနက်ရှိဖို့၊ ကိုယ့်သားသမီးရဲ့ အသိဥာဏ်ကို ယုံဖို့လိုတယ်လို့ ထင်တယ်လေ။ သမီးကို ကျွန်မ အဲဒီလောက်ထိ ယုံတယ်။ ဒါကြောင့် သမီးကသာ ဒီကိစ္စကိုရွေးချယ်ရင် ကိုယ့်ဘက်က အလေးအနက်ရှိမှာပါ။ သမီးကို အဲဒီလိုတန်ဖိုးထားတာ ဆရာခင်ခရေ။
အန်တီပဒုမ္မာရေ — ဒီတစ်ခေါက် မွေးတာ ခံရတယ်။ ပထမတစ်ခါတုန်းကလို မဟုတ်ဘူး။ စီကာစဉ်ကာ ပြောလိုက်ရင် ရွာထဲက အပျိုကြီးလုပ်ဖို့ တာစူနေတဲ့ ရွာသူတွေ အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်း ရသွားမှာစိုးလို့ ခံရပုံတွေ မပြောတော့ပါဘူး။ အနာကောင်းကောင်းမကျက်လို့ ဆေးရုံမှာ အကြာကြီးနေခဲ့ရတယ်။
ကိုကြီးကြောင်၊ ကိုအရွေ့ — ကျေးဇူးပါနော်။
ကိုမင်းနန္ဒာ — သမီးက ပိုအားထားရမယ်ဆိုတာ သေချာပေါက်ပြောလိုက်ပါရစေ။
မယ်ပုရေ- စာအုပ်ပို့ပေးမယ်နော်။ pdf လုပ်တာ မလုပ်တတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မေးလ်ကိုပဲ ၆စောင်လောက်ခွဲပြီး ပို့ပေးလိုက်မယ်။ သားလေးက အသားကတော့ မြန်မာကြိုက်ပေါ့။ ဖြူဥနေမယ့်အသားမျိုး။
နာမည်ကိုတော့ ထွေထွေထူးထူး မစဉ်းစားဘဲ (သမီးနာမည်က ပြုံးမြင့်မို ဆိုတော့ ) ပြုံးမြင့်မောင် လို့ပေးလိုက်တာ ဗေဒင်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေက တစ်စက်မှ မကောင်းတဲ့နာမည်လို့ ပြောကြတယ်လေ။ တခြားနာမည်လည်း စဉ်းစားလို့ မထွက်ဘူး။ ဘယ်လိုထင်လဲ။ ဒီတစ်ခါ ဗေဒင်ကို စိန်ခေါ်ပြီး ဒီနာမည်ပဲပေးသင့်လား။
သူကြီးရေ — ခလေးက ၇ပေါင်ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီလောက်ရဖို့ကိုတောင် တစ်ရက်ကို ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး ၁၂ လုံးစားထားတာ ၅လလောက်ရှိတယ်။ အခုပုံလေးကတော့ ၄ရက်သားပါ။
သကြားလုံးကြော် — သားလေးက ကြီးလာရင် ကိုရီးယားမင်းသားရှုံးအောင် မိန်းမချောလေး ဖြစ်ဖို့များနေတာနော်။ အသားက ကြည်စင်နေတာ။ ကြိုတင် စရံသတ်ထားနိုင်အောင် ပြောတာပါ။
ဘဖော၊ ကိုအံစာ၊ Fall Guy — ကျေးဇူးအထူးပါရှင်။
အမရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ကျမတကယ်ကို ဖတ်ချင်နေလို့ပါ။
နောက် ပေးထားတဲ့ ပြုံးမြင့်မို ပြုံးမြင့်မောင် ဆိုတဲ့ နာမည်လေးတွေက တခါကြားပြီးရင် မေ့နိုင်စရာ မရှိတဲ့ နာမည်လှလှလေးတွေပါ။
ဗေဒင်နဲ့ ကိုက်မကိုက်တော့ ကျမလည်း မပြောတတ်ဖူးအမရေ ။ ကျမ မှာလည်း အရင်က နာမည် တခု ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အမေ့စ်ိတ်ကြိုက်ပေးခဲ့တာပါ။
ဗေဒင်အရ မကိုက်လို့ မှတ်ပုံတင် လုပ်တော့မှ ပြောင်းထားတဲ့ နာမည်ကို အတည်လုပ်ပြီး အခုနာမည်ဖြစ်လာတာပါ။ တခုတော့ ရှိတယ်။ ဇာတာထဲမှာ ဗေဒင်က ပေးတဲ့ နာမည်ကို ထည့်ထားရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အိမ်က အဒေါ်က ဇာတာမှာ နေ့နံသင့်တဲ့ နာမည်ထည့်ထားတယ်။
အပြင်မှာတော့ စိတ်ကြိုက်နာမည်နဲ့ နေပါတယ်။ စတိသဘောမျိုးလောက်ဆိုလည်း ရတာပါပဲ ။ ဆိုတော့ ဒီနာမည်လေးတွေ မှည့်ချင်ရင် ဒီလိုလေး လုပ်လို့ ရမလားပဲ ။ ကျမတော့ ဒီနာမည်လေးတွေ ကြိုက်တယ်။
ရွာသားလောင်း တစ်ဦး တိုးလာပြီပေါ့ဗျာ
သားဦးလေးမွေးတယ်ဆိုတော့ မဝင်းပြုံးမြင့်တစ်ယောက် ယောက်ခထီး ယောက်ခမ ရဲ့ အထူးစပါရှယ် မျက်နှာသာပေးခံရတော့မှာ ၁၀၀%ပါပဲ
မဝင်းတို့ တစ်မိသားစုလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ
ဆောတီးပါဗျို့ပထမ သမီးလေးမွေးထားတာကို ကျော်ဖတ်မိသွားလို့ပါခင်ဗျ
ရွာသားအဖြစ် မန်ဘာ ဝင် တော့
က = ကလေးငယ် ချစ်စဖွယ်
ခ = ခရေကုံး မလေးပြုံး
ဂ = ဂဏန်းသင် ပြုံး ရွှင်ရွှင်
ရေး စေ သတည်း
ကလေးလေးက နီတာရဲ ချစ်စရာလေး
ဟေးးးး ပျော်လိုက်တာ အန်တီ့ကို ယောက်ဂမဂျီးတော် လိုက်ပြီနော် မိဗုံအရင်ပြောထားတာနော်
ဘယ်သူ့မှမပေးရဘူးနော် ကျောက်ပြင်ရွက်ပြီးစောင့်နေမှာ :harr:
ကလေးပုံလေးတွေ့ကတည်းက ပြုံးတော့ မွေးပြီ။ ကလေးရော လူကြီးပါ ကျန်းမာပါတယ်လို့ ရွာထဲကို အကြောင်းကြားလိုက်သလိုမို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ချစ်စရာ လက်နှစ်ဖက်လုံးထောင်နေတဲ့ကလေး နှယ်နှယ်ရရတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။
ကလေးနာမည်ကို (ကွန်ဆာဗေးတစ်မို့) သေသေချာချာ မေးမြန်းပြီး ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးနာမည်ဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် ပညတ်ဖြစ်လို့ အရေးကြီးတယ် ထင်ပါတယ်။
ပြောရရင် ဦးကျောက်ခဲရဲ့ အာဝေနိက ချစ်ဒုက္ခမှာလည်း ဗေဒင်ဆရာရဲ့ ဆိုဒ် ပြောထားသေးတယ်။
Congratulation ပါ ဆရာမရေ ။
နံမည်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် ဘာ အယူမှ မရှိလည်း အခြားသူများ စိတ်အေး စိတ်ချမ်းသာအောင် သူတို့ အလို လိုက်ပေးလိုက်တာ အားလုံး ကောင်းစေမယ် ထင်ကြောင်းပါ ။
နှင်းစက်ကလေးများ၏ လှပခြင်း ပါဝင်အောင်
မောင်နှင်းနု ဟု မခေါ်တွင်ရ
စ တာ နော့်
သားလေးမွေးတာ ၀မ်းသာပါတယ် အစ်မရေ…
အစ်မပြုံးရဲ့ သားလေးက ချစ်စရာလေး..တူလေးအတိုင်းပဲ…
အသားက ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ၊ ပါးနှစ်ကွက်က နီရဲနေတာ….
သမီးကတော့ သားလေးနဲ့အသက်ကွာတော့ အစ်မပြုံးနဲ့ကလေးအတွက် ကူဖော်ရမယ် ထင်တယ်…
အစ်မ၀မ်းကွဲတွေက သူတို့မမွေးခင် နာကျင်ခံစားရတာ(ရိုးရိုးမွေးရော၊ခွဲမွေးရော)၊ မွေးပြီးတော့
လည်း ခံစားရတာတွေက ဆေးရုံသွားနေနေတဲ့အခိုက်တော့ တွေ့ခဲ့ရတာပဲ….
နှင်းနှင်းကပါ ကလေးလေးတွေကြည့်ရင်း ၀မ်းသာနေပြီး နီတာရဲဆိုတာ ဒီလိုချစ်စရာကောင်း
တာပဲဆိုပြီး ကြည့်မ၀နဲ့ ပျော်ရတာလေ…
မိဘတွေရဲ့ ခံစားချက်ကတော့ နှိုင်းမရဘူး ထင်တယ်…
အစ်မပြုံးရဲ့ သာလေးမွေးတုန်းက အတွေ့အကြုံကိုလည်း အလျဉ်းသင့်ရင် ရေးပါလား…
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ” ဝေဒနာ နဲ့ ပီတိ ” တွဲနေတဲ့ စာအစစ်မို့ ကောင်းမှာပါ…
အစ်မပြုံးရဲ့ အရေးကောင်းပုံတွေကြောင့် အပျိုကြီးလုပ်ဖို့ တာစူနေတဲ့ ရွာသူတွေလည်း
“သားလေးက ကွန်ပျူတာသုံးဖို့ လက်ကို Ready လုပ်ထားနေပြီ အမေကြီးရေ့။
ကလေးငယ်များ ဒီလိုလက်အနေအထားနဲ့ အိပ်တာမတွေ့ဖူးဘူးဗျ…
ကျနော့သား ဘေဘီမိုက် ငယ်ငယ်က ထိုင်တတ်ခါစလေး…
တီဗီရမုကို လက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပီး တီဗီရှိရာချိန် နှိတ်ထည့်လိုက်တာ
ဟောခုတော့ လည်း ကွန်ပြူတာ၊ ဟန်းဖုန်း ကလိသလားမမေးနဲ့..
နေအင်္သချေ လအင်္သချေ စာအုပ်ကို
ရန်ကုန် ၈ မိုင် လမ်းဆုံနားက..
ဂျန်းရှင်း 8 အထဲက စီးတီးမတ် စာအုပ်ဆိုင် မှာ..
ဒီညနေ ကျွန်တော်..၀င်ကြည့်ခဲ့သေးတဲ့ အထိတော့.ရှိနေသေးပါတယ် ။
တန်ဖိုး 3000 လို့ရေးထားပါတယ် ။
ကျမက မန်းလေးက ဆိုင်တွေကို ပြောတာ ရှင့်။ ရန်ကုန်ရောက်ဖြစ်ရင်တော့ မွှေကြည့်ပါအုန်းမယ်။ သတင်းပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
သားသားလေး ကျန်းမာချမ်းသာပြီး အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
တူ တူမလေးတွေ ခွဲခန်းက ထွက်ထွက်ချင်းလေးတွေ မြင်ဖူးခဲ့တုန်းက ကလေးဆိုတာ တော်တော်ချစ်စရာကောင်းပါလားလို့ ခံစားခဲ့ဖူးတယ် …
မပြုံးရဲ့ သားလေးကို မြင်ရတာလဲ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ ခံစားရတယ် …
ကွန်မင့်ပေးသူအပေါင်းနှင့် ဖတ်ရှုသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ခလေးကိစ္စ လုံးပန်းနေရတာနဲ့ မအားလို့ ပြန်မဖြေပေးဖြစ်တာပါ။
ဆရာပေရေ – ပြုံးရဲ့ ယောက်ခထီးယောက်ခမ တွေက ဆုံးသွားရှာပါပြီ။
ဗုံဗုံရေ – အန်တီလို့မခေါ်နဲ့နော်။ ချိတ်ချိုးပစ်လိုက်မှာ။ ခုမှ ၄၀ ထဲရှိသေးတာကို။ ဘ၀ကဖြင့် ခုမှစတာ။
မမရေ – ဦးကျောက်ခဲရဲ့ ပို့စ် မဖတ်ရသေးဘူး။ ရှာပြီးဖတ်လိုက်ပါ့မယ်။
နှင်းနှင်းရေ- အားပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။ အချိန်ရရင် ရေးကြည့်ပါဦးမယ်။ ပါစင်နယ်များနေမှာစိုးလို့ စဉ်းစားနေတာပါ။
စီဂျေကြီးရေ – နာမည်ကိစ္စပြန်စဉ်းစားရဦးမယ်။ ပြုံးက အဲဒါတွေ အယူအဆ မရှိလို့ လက်ခံဖို့ခက်ခဲနေတယ်။
ဦးကြီးမိုက် – ဘေဘီမိုက် ကို သည်းသည်းလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ ဒီခေတ်ခလေးတွေက ဦးနှောက်အသစ် ဖြစ်နေကြတယ်။ တကယ်ပြောတာပါ။
မဝေ၊ မေဖလားဝါး – ကျေးဇူးပါနော်။ ရွာ့အသိုက်အ၀န်းလေးထဲ နေရတာ တစ်မျိုးပဲ၊ အပြင်လောကနဲ့ မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ အစ်မက ခင်တတ်ပါတယ်နော်။
Congratulation ပါ ဆရာမရေ…။
ဒီရက်ပိုင်း ဆရာမရဲ့ စာအုပ်အသစ်ကြော်ငြာလေး တစ်ခု
သတင်းစာထဲ ဖတ်မိလို့ သတိရနေမိပါသေးတယ်…။
၀ယ်ဖြစ်အောင် ၀ယ်မယ်လို့ လည်း တေးထားပါတယ်…။
စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ သားသားလေးကိုပြောလိုက်ပါနော် ။